Fu’aad Shongole: Mareykanku waa beenaale, waa cadowga Alle | Baydhabo Online
Fu’aad Shongole: Mareykanku waa beenaale, waa cadowga Alle
Fu’aad Maxamed Khalaf (Fu’aad Shongole) oo ka mid ah Saraakiisha sar sare ee Ururka Al Shabaab, ayaa ka hadlay qorshaha Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump uu ku ballaarinayo hawlgalada ka dhanka ah Al Shabaab, ee Mareykanku uu ka fulinayo Somaliya.
Fu’aad Maxamed Khalaf oo boqolaal qof kula hadlayay Degmada Salagle ee Gobolka Jubbada Dhexe, ayaa sheegay in maalmahaan ay soo yeerayan hanjabaado ka dhan ah Ururka Al Shabaab.
“Maalmahaan warar badan baa soo yeeraaya. Gaaladu waxay leeyihiin dagaalka waanu kordhinaynaa, dhulalka ay Muslimiinta haystaana aag dagaal baanu ka dhigaynaa.” Ayuu yiri Fu’aad Maxamed Khalaf.
Fu’aad Shongole, ayaa dagaal-yahanada Shabaabka u sheegay inaanay wax dheg jalaq ahi u siinin hanjabaadaha kaga imaanaya Dowladda Mareykanka.
“Sidaa daraadeed Muslimiinta waxaa ku waajib ah in aanay gaalada warkooda dheg u dhigin.” Ayuu yiri Fu’aad Shongole oo ka mid ah Saraakiisha Shabaabka, ee uu Mareykanku madaxyadoodu duldhigay malaayiin dollar.
Ina Shongole, ayaa yiri “Dushayada waxaa waajib ku ah oo dusha aanu u saaranay inaan Mu’miniinta u gargaarno, sidaa daraadeed Mareykanku waa beenaale, waa cadowga Alle, Rasuulkiisa iyo Mu’miniinta.”
Shabaabka oo ku xoogan qaybo ka mid ah Gobolada Koonfurta & Bartamaha Somaliya, ayaa dhibaatada ugu badan waxay u gaystaan shacabka Somaliyeed ee Muslimiinta, xilli ay ku doodayan in ay badbaadinayan umadda Muslimiinta.